बास्केटबल कोर्टजत्रो थियो होला विश्वकै ठूलो डाइनासाेर : अध्ययनकर्ता | Nepal Flash
अनुसन्धानकर्ताहरुले डायनासाेरबारे अनाैठाे खुलासा गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार टाइटोनोसर प्रजातीका डाइनासोर झन्डै बास्केटबल कोर्ट जत्रो आकारका थिए ।
सन् २००७ मा अष्ट्रेलियामा भेटिएको टाइटोनोसर प्रजातीको डायनासोरको अवशेषको अध्ययन गरेपछि उनीहरु यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । यसलाई महाद्वीपकै सबैभन्दा ठूलो डायनासोर मानिएको छ ।
अनुसन्धानकर्ताका अनुसार संसारमा हालसम्म १५ सबैभन्दा ठूला डायनासोरबारे जानकारी उपलब्ध छ । तीमध्ये द अष्ट्रेलोटिटन कोपरेन्सिस वा द सदर्न टाइटन (टाइटोनोसर) एक हो । विशेषज्ञले यी टाइटोनोसर प्रजाती ६. ५ मिटर अग्लो र ३० मिटरसम्म लामो भएको अनुमान गरेका छन् । यसको अर्थ यो हो कि यसको आकार लगभग एक बास्केटबल कोर्ट जति थियो होला । यसको अवशेष २००६ मा अस्ट्रेलियाको दक्षिण पश्चिम क्विन्सल्याण्डको अरोमंगाको एउटा खेतमा भेटिएको थियो ।
त्यसयता, वैज्ञानिकहरुले पछिल्लो एक दशकभन्दा बढी समयदेखि यसको अध्ययन गरिरहेका छन् । यसको हड्डीको स्क्यानको तुलना सरोपोड्स प्रजातीका डाइनासोरसँग गरेपछि वैज्ञानिकहरु यो फरक प्रजातीको रहेको निष्कर्षमा पुगेका थिए । त्यसपछि उनीहरुले यो प्रजाती टाइटोनोसर रहेको पहिचान गरे ।
सरोपोड्स के हो ?
वैज्ञानिककका अनुसार यो डायनासोर लगभग ९‍ करोड ६० लाख वर्षअघि क्रेटेशियस कालका बेला महाद्वीपमा थिए होलान् ।
डाइनासोरबारे अध्ययन भने अझै जारी नै छ ।
८५ वर्षकी हजुरआमाले डेटका लागि विज्ञापनमार्फत मागिन् लक्काजवान